တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မွေးရပ်မြေမှ ပေးစာ (၂)
Posted by မေဓာဝီ at 4:30 PM
မမေက ရောက်လေရာ ကင်မရာ ယူသွားပုံရတယ်...ကျွန်တော်တော့ ရွှေပြည်သားအကျင့်အတိုင်း တွေ့ကရာ ဓာတ်ပုံမရိုက်ရဲဘူးဗျာ...ဒီမှာက ခဏဆိုပြီးခေါ်သွားရင် အနည်းဆုံး သုံးနှစ်ကိုးး)
အမှိုက်ပုံတွေအကြောင်းကတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူးလေ...မနှစ်က ရန်ကုန်ခဏရောက်သွားတော့ လမ်းဘေးအမှိုက်ပုံကြီးတွေ ဟီးထနေတာကြည့်ပြီး ကြက်သီးတောင် ထတယ်...
တိုးတက်နေတဲ့ ရွှေပြည်မှာ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေဗျား...း)
ဂျာနယ်သည်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းသည်နဲ့ အုန်းသီးသည် တို့က မမေရဲ့ ကင်မရာကို စိုက်ကြည့်နေကြတယ်၊ တိုးရစ်နဲ့ သတင်းထောက်.. နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခုပဲလို့ တွေးနေကြပုံပဲ၊း) ခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းလောက်နဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်တော့ဘူးနော်၊ လူကြီးတွေ ပြောကြသလို ငွေဟာ အသုံးမခံတော့ဘူးလို့ ပြောရတော့ မှာပါပဲ၊း))
ပိတောက်တွေကို ဘုရားစင်မှာ ပူဇော်ထားတာ ကျက်သရေ ရှိလိုက်တာ..၊ မမေနဲ့ အမကြီးတို့ အတွက်လည်း ကြည်နူးဖွယ်ရာ အတာသင်္ကြန်နဲ့ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်ကူးအခါ သမယ ဖြစ်ပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက် ပါတယ်ဗျာ..။
ဦးဟန်ကြည်ပြောတာကိုဖတ်မိပြီး ပြုံးတော့တာပဲ.. ဟုတ်တယ်.. ရန်ကုန်မှာ တွေ့ကရာဓါတ်ပုံမရိုက်ရဲဘူးဗျာ... မမေတို့ မချောတို့တွေကိုတော့ လေးစားပါရဲ့.. :D.. ရွှေပြည်ကြီးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.
ဘုရား စင် လေးက သပ္ပါယ်လိုက်တာ.... နောက်ပေးစာတွေကို မျှော်နေမယ်နော် အမ
4/11/2012 6:27 AM
အတာမှာ ရန်ကုန်မှာ ရှိမှာပေါ့၊
ပိတောက်ပန်းတွေ ဘုရားတင်ထားတာ သာဓုသာဓုသာဓု
ဘးရန်ကင်းကွာ အေးချမ်းသာယာ ရှိပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်မှာ..ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ မိသားစု အချိန်လေး များ ဖြစ်ပါစေ..မမေ..။
ခေမရဌ် ရှေ့က စောင့်နေနော်..လာခဲ့မယ်.. ။ :D
I miss the smell of Padauk. Happy New Year!!
4/14/2012 8:37 PM
ဟုတ်ပါ့ မမေရေ..နိုင်ငံခြားမှာ တနှစ်ရှာတာ မြန်မာပြည်မှာ တလသုံးရင် ပြောင်ပြီ..အမှိုက်ပုံကလည်း ခုထိ အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူး..နောက်ထပ် ပေးစာများကို မျှော်နေပါတယ်နော့
ပိတောက်ပန်းလေးတွေ မြင်ရတာ ..အလွမ်းပိုစေတယ်မမ..:):)
အော် ... မြန်မာပြည် ...။